PARIJATMEDIA - Page2of 156 - Updating Nepali
भारतीय मुलका यी १२ चर्चित पो’र्नस्टार [तस्विरसहित]
पो र्नस्टारको छबी बनाएकी सन्नी लियोनी अहिले बलिउडको चर्चित नायिकाको रुपमा चिनिन्छिन् । सन्नी क्यानडामा जन्मिएकी थिइन् भने उनी पञ्जाबी शीख परिवारकी सदस्य हुन् । उनको खास नाम करनजीत कौर हो । एडल्ड फिल्ममा प्रवेश गरेपछि उनले आफ्नो नाम सन्नी राखेकी थिइन् । पछिल्लो समय उनीमाथि डकुमेन्ट्री समेत बनेको छ । सन्नीको अतिरिक्त भारतीय मुलका अरु धेरै पो र्न स्टार विभिन्न मुलुकमा छन् । यी मध्ये कसैले आफ्नो पेशा छोडिसकेका छन् त कोही अझै पो र्न फिल्ममै सक्रिय छन् । हेरौं उनीहरु कहाँ के अवस्थामा छन् । प्रिया अञ्जली रायः प्रियाको जन्म दिल्लीमा भएको थियो । उनले केहि पो र्न फिल्ममा काम गरेकी छिन् । सन २००७ मा २९ वर्षको उमेरमा उनले एडल्ट फिल्ममा करिअर सुरुवात गरेकी थिइन् । सन २०१३ मा उनले एडल्ट फिल्ममा काम नगर्ने घोषणा गरेकी थिइन् । तत्कालिन समयमा कुनै ब्यबसायीसंग विवाह गरेर घरवार सम्
काेरोना भाइरस (कोभिड–१९)को महामारीसँगै यतिखेर मास्कको ट्रेण्ड चलिरहेको छ । भाइरस संक्र मणबाट बच्नका लागि भन्दै मानिसहरूले अनौठा मास्कहरू बनाउन थालेका छन् । काेराेनाकाे माहामारीमा माक्सकाे चर्चा हुदै गएकाे छ । कतियपले टपरीकाे माक्स लगाएका छन् भने कतिपयले पलास्टिककाे लगाएका छन् । यसैबीच भारतमा एक व्यक्तिले सुनको मास्क बनाएका छन् । भारतको पुणेका एक व्यक्तिले ५० ग्रामभन्दा बढी तौलको एक मास्क बनाएका छन् जसको मूल्य २ लाख ८९ हजार भारतीय रुपैयाँ रहेको छ । पुनेमा बस्ने शंकर कुराडेले सो मास्क बनाएका हुन् । उनले बताएका छन्, मास्कमा साना साना प्वाल बनाइएकोछ, जसबाट स्वास प्रवाहका लागि समस्या हुँदैन । याे सुनकाे माक्स अहिले सामाजिक संजालमा निकै चर्चामा अाएकाे छ ।
हिन्दुराष्ट्रको माग गर्दै सडकमा प्रदर्शन।
धनुषा- जनकपुरमा हिन्दुराष्ट्र स्थापनाको माग गर्दै सडकमा प्रदर्शन गरिएको छ । नेपाल राष्ट्रवादी समूहले प्ले कार्ड बोकेर प्रदर्शन गरेको छ । शनिबार जनकपुरको जनक चोकबाट सुरु भएको प्रदर्शन नगरको विभिन्न भागको परिक्रमा गर्दै पुनः जनक चोकमा पुगेर कोणसभामा परिणत भएको थियो । राष्ट्रिय सभाका पूर्वसदस्य कारीप्रसाद यादवको अगुवाइमा भएको सो प्रदर्शनमा नेताहरुको कारण मुलुकको राष्ट्रियता नै खतरामा परेको भन्दै सहभागीले नेपाललाई हिन्दुराष्ट्र घोषित गर्नुपर्ने माग गरे । यादवले देशलाई हिन्दू राष्ट्र घोषणा गर्नु आजको आवश्यकता रहेको भन्दै आफूहरुले अभियान संचालन गरि राज्यमाथि दवाव सृजना गर्ने बताए । प्रदर्शनमा सहभागीले नागरिकता विधेयक फिर्ता गर, भ्रष्टाचार अन्त्य गर लगायतका नारा अंकित प्लेकार्ड र ब्यानर बोकेर प्रदर्शन गरेका थिए । विरोध कार्यक्रममा वीरेन्द्र कर्ण, प्रकाश राणा लगायत युवा, महिला र साध
भारतीय मिडियामा भाइरल ‘नेपाली युवती अञ्जना’ ! [फाेटाे फिचर]
अञ्जना दास, जो भारतीय मिडियामा गत केहिसमय पहिले चर्चामा रहेकी थिइन् । ‘इन्टरनेट दुनियाँमा सनसनी मच्य्चाउने यी नेपाली युवती’ शीर्षकमा विभिन्न भारतीय मिडियामा प्रस्तुत तस्बिर राखिएको थियाे । यी नेपाली सुन्दरी युवतीको लाखौ फ्यान फेलोअर्स भइसकेका छन् । नेपाली मिडियामा खाशै नसुनिएको यो नाम भारतका एक दर्जनभन्दा बढी अनलाइन मिडियामा प्रस्तुत आखिर को हुन् त यी भारतीय मिडियामा भाइरल बनेकी अञ्जना दास ? तस्बिर मिस पोखराबाट भनेर भारतीय मिडियाले सनसनी बनाइरहेको यी यवती साँच्चीकै सुन्दरी छिन् । केही मिडियाले यसो पनि भनेका थिए कि ‘यी नेपाली सुन्दरी युवतीको लाखौ फ्यान फेलोअर्स भइसकेका छन् । नेपाली मिडियामा खाशै नसुनिएको यो नाम भारतका एक दर्जनभन्दा बढी अनलाइन मिडियाले प्रस्तुत तस्बिरकी अञ्जनालाई ‘केही नेपाली फिल्ममा समेत काम गरिसकेकी’ भनेर उल्लले गरेका थिए । ‘ये लड़की देखते ही देखते दुनिया भर मे
“यी सुन्दरी युवतीले कुकुरसँग नियमि,यस्तो गर्न थालेपछि”(भिडियोसहित)
विश्वका कुनै–कुनै घटना अत्यन्तै अपत्यारिला छन् । अहिले फेरी सुन्दर देखिन एउटी युवतीले गरेको ह र्कत चर्चामा छ । हुन छ युवतीहरु आफ्नो सुन्दरताको लागि केसम्म गर्लान्रु डाइटिङ गर्लान्, महँगो सामान प्रयोग गर्लान्। यी त सामान्य भए। अमेरिकाकी एक युवतीले सुन्दर देखिनको लागि कुकुरको पि साब पिउने गर्छिन्। राम्री देखिनको लागि आफूले दैनिक कुकुरको पिसाब पिउने गरेको उनले बताएकी छिन्। लिन नाम गरेकी ती सुन्दरीलाई लामो समयदेखि धेरैजनाले उनको सुन्दरताको कारण सोधिरहेका थिए। उनी भन्छिन, ‘कुकुरको पि साबबाट भिटामिन ए, भिटामिन ई र १० ग्राम क्यालसियम प्राप्त हुन्छ। यसले क्यान्सर रोग लाग्नबाट बचाउँछ।’ त्यसको जवाफमा उनले आफूले दैनिक रुपमा कुकुरको पि साब पिउने गरेको बताइन्। यसको प्रयोगले पिम्पलहरु नआउने र स्किनलाई चम्किलो राख्ने उनले बताइन्। लिनले पार्कमा लगेर कुकुरलाई पि साब गराउने र त्यो जम्मा गरेर पिउने
य’स्तो गरेपछि रातारात टिकटकमा भाईरल भईन्,यि नेपाली युवती । हिरोईन भन्दा राम्री गीताको यस्तो (भिडियो आयो हेर्नुहोस)
भारतले चिनियाँ सर्ट भिडियो एप ‘टिकटक’सहित ५९ स्मार्टफोन एपमाथि प्रतिबन्ध लगाएसँगै त्यसको फाइदा भारतीय एपलाई पुगेको छ । सरकारले यस्तो निर्णय गरेसँगै टिकटकको प्रतिस्पर्धी ‘चिङ्गारी’ एप डाउनलोड गर्नेको संख्या ह्वात्तै बढेको छ । चिङ्गारीका संस्थापकले मंगलबार यो एप प्रतिघण्टा १० लाखभन्दा बढीको दरले डाउनलोड भएको बताएका छन् । चिनियाँ एपमाथि प्रतिबन्ध लगाइएसँग भारतीय एप प्रतिस्पर्धीहरु खुसी भएका छन् । ‘चिङ्गारी’का संस्थापक सुमित घोषका अनुसार केवल ७२ घण्टामा भारतमा चिङ्गारी एप पाँच लाखपटकभन्दा बढी डाउनलोड भइसकेको उनले बताएका हुन् । भारतको निर्णयपछि यो एपको भ्युज पनि प्रतिघण्टा दुई लाख नाघेको घोषले बताए । TIK TOK बाट आएकी यति राम्री गीता ढुंगानाको हिरोईनलाई टक्कर दिने अभिनय (भिडियो हेर्नुस)
“कि’स गर्न र मास्क खोल्न नपाईने,सर्तमा यौ’नबजार खुल्यो”
काठमाडौं । विश्वभर लागु गरिएका ल’कडाउनका बन्द भएको यौ’न व्यवसाय पुनः खुला गरिएको छ । नेदरल्याण्ड र थाइल्याण्ड सरकारले आफ्नो देशका वे’श्यालय र रे’डलाइट एरिया क’डा प्र’तिबन्धको नियमसहित खोल्न अनुमति दिएका छन्' । यी देशमा अब यौ’नकर्मी र ग्राहकहरु रे’डलाइट एरियामा जान पाउँछन् तर कि’स गर्न पाउँदैनन् । उनीहरुले जोडले सास फेर्न पनि पाउने छैनन् । थाइल्याण्डको राजधानी बैंककको रे’डलाइट एरिया ३ महिना बन्द रहेपछि १ जुलाइदेखि खुलेको छ '। थाइल्याण्डका बार, काराओके भेन्यू, मसाज पार्लर आदि पनि खुलेका छन् । विगत ३७ दिनदेखि थाइल्याण्डमा को’रोना सं’क्रमणको एउटा पनि स्थानीय के’स नभेटिएपछि यहाँ यी व्यवसाय खोल्न अनुमति दिइएको हो '। यससँगै हजारौंको संख्यामा रहेका यौ’नकर्मीहरु आफ्नो काममा फर्किएका छन् '।
कोरोनाविरुद्ध खोप विकास गर्ने व्यक्तिसँग यौ’न सम्बन्ध राख्ने पो’र्नस्टारको वाचा
एजेन्सी- रुसी पो’र्नस्टार लोला टेलरले कोरोना भाइ’रस विरुद्ध खोप विकास गर्ने पहिलो व्यक्तिसँग यौ’न सम्बन्ध राख्ने वाचा गरेकी छन् । उनले धेरै दिनदेखि बाहिर निस्कन नपाएको र क्वारेन्टाइनमा बस्न बा’ध्य पारिएका कारण यस्तो निर्णय लिएको बताएकी छन् । कोरोना परीक्षणका लागि डाक्टरले प्रायः हरेक दिन उनको शरीरबाट रगत लिन आउँदछन् । जसका कारण उनी दिक्क भएको बताउछिन् । क्वारेन्टाइन बाहिर निस्कन नसक्ने बताउँदै उनी भन्छिन्-,’ क्वारेन्टाइन तोड्न सक्दिन, किनभने यसको लागि मलाई जेल पठाइनेछ।’ रुसी पो’र्नस्टार लोला टेलरले कोरोना भाइ’रस विरुद्ध खोप विकास गर्ने पहिलो व्यक्तिसँग यौ’न सम्बन्ध राख्ने वाचा गरेकी छन् । आफ्ना फ्यानसमक्ष एक भिडियो सार्वजनिक गर्दै उनले भनिन-, ‘म कोरोना भाइ’रसविरूद्ध खोप बनाउने कसैसँग पनि यौ’न सम्बन्ध राख्न तयार छु ।‘